रुकुम जाजरकोट घ`टना : घट`ना भएको २३ दिनपछि प्रहरीको यो निष्कर्षले लियो अर्कै मोड, ह’त्या गरेको पुष्टी ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/रुकुम जाजरकोट घ`टना : घट`ना भएको २३ दिनपछि प्रहरीको यो निष्कर्षले लियो अर्कै मोड, ह’त्या गरेको पुष्टी !
रुकुम जाजरकोट घ`टना : घट`ना भएको २३ दिनपछि प्रहरीको यो निष्कर्षले लियो अर्कै मोड, ह’त्या गरेको पुष्टी !
चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीगाउँमा भएको घटनामा संल`ग्न रहेको आरोपमा ३४ जना विरु`द्ध आज अभियोग दर्ता भएको छ । पक्रा`उ परेका र फरार रहेका समेत गरी ३३ जना वि रुद्ध तीन कसूर र एक जना विरु`द्ध मतियार कसूरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभि`योग दर्ता गराएको हो । पक्रा`उ परेका सोती गाउँका २८ र फरार पाँच जनासहित गरी ३३ जनावि`रुद्ध क’र्तव्य ज्यान, ज्या’न मा’र्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवा`छुत गरी तीन कसूरमा अभियोग दर्ता भएको हो । त्यस्तै प`क्राउ परेका जाजरकोटका एक जनावि`रुद्ध मतियार कसुरमा अभियोग दर्ता भएको छ ।
घटनामा नवराज विक सहित ६ जनाको सा’मूहि’क ह त्या योजनाब द्ध रुपमा बाटोमा छेकेर भएको प्रहरीको पनि निष्कर्ष छ । पोष्ट`मार्टमको रिपोर्ट र अन्य अनुसन्धानको आधारमा निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ । आइतबार प्रहरीले निष्कर्ष सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । र, जिल्ला सरकारीको वकिलको कार्यालयले ३४ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मु`द्दा दर्ता गरेको हो ।
पक्राउ परेका र फरार रहेका समेत गरी ३४ जनामध्ये ३३ जनालाई तीन र एक जनालाई तीन वटै कसुरमा मतियार रहेको अभियोग लागेको रुकुम अदालतका स्रेस्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३३ जना वि`रुद्ध मुलुकी अ’पराध संहिताको दफा १७७ (२) अनुसार जन्मकैद, दफा ४१ (क) (ग) बमोजिम आजीवन कारा`बास र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ को दफा ३ (१) र दफा ४, ५ को कसूरमा दफा ७ (१) क बमोजिम कैद सजा`यको माग गरिएको छ ।
प्रतिवादी इन्द्र बहादुर मल्लको हकमा भने अपराध संहिताको दफा ३६ को क`सूरमा दफा ३३ (ख) बमोजिम सजायको माग दावी गरिएको छ । घटना भएको २३ दिनपछि आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रुकुम जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो । आज अभियोग दर्ता भएपछि अब सोमबारदेखि बयान शुरु हुने स्रेस्ते`दार बोहराले बताउनुभयो । पक्राउ परेकामध्ये दुई बाल बालिका छन् । उनीहरुको बयान सोमबार देखि शुरु हुने र बाँकीको बयान मंगलबार देखि शुरु हुने स्रेस्ते`दार बोह`राको भनाइ छ ।